FISAKAVANA Sikorsky Pavehawk UH-60 FS2004 - Rikoooo
Downloads 15 241
Mpanoratra: Jordana Moore, Dave Eckert, Deane Baunton, Brian McIntyre, Kirk Sunley
Helikoptera manana kalitao tokana, alao izao. Feo mahafinaritra miaraka amin'ny sangan'asa 5, panel 2D ary VC.
Ny Sikorsky UH-60 Black Hawk dia milina efatra misy bladed, twin-maotera, helikoptera fananganana haingam-pandeha vita amin'ny fiaramanidina fiaramanidina Sikorsky. Sikorsky dia nandefa ny famolavolana S-70 ho an'ny fifaninanana momba ny fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina Tafiky ny Tafika Amerikanina (UTTAS) an'ny 1972. Ny tafika dia nanendry ny prototype ho YUH-60A ary nisafidy ny Black Hawk ho mpandresy ny fandaharana amin'ny 1976, taorian'ny fifaninanana fly-off miaraka amin'ny Boeing Vertol YUH-61.
Ny UH-60A dia niditra tolotra niaraka tamin'ny Tafika amerikana tany 1979, hanoloana ny Bell UH-1 Iroquois ho helikoptera fitaterana entin'ny tafika. Narahin'ny fiadiana tamin'ny ady elektronika sy ny fiasa manokana tamin'ny Black Hawk izany. Ny fanatsarana UH-60L sy ny UH-60M miova dia efa namboarina koa. Ireo dikan-teny navaozina dia novolavolaina ho an'ny Tafika Amerikana, ny tafika an'habakabaka ary ny Guard Guard. Ho fanampin'ny fampiasana tafika amerikanina, ny fianakaviana UH-60 dia navarina any amin'ny firenena maro. Ny Black Hawks dia nanompo nandritra ny ady tany Grenada, Panama, Iraq, Somalia, Balkans, Afghanistan, ary faritra hafa any Moyen-Orient. (Wikipedia)
Sikorsky S-55 Tadio ny FS2004
Sikorsky CH-124 Ranomasina HAR3A Mpanjaka FS2004